ကယ်လစ်ပါ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကယ်လစ်ပါ (အင်္ဂလိပ်: caliper or calliper) သည် အရာဝတ္ထုများ၏ အရွယ်အစားကို တိုင်းတာသည့် ကိရိယာဖြစ်၏ ။ ကယ်လစ်ပါအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး ဒီဂျစ်တယ်၊ ဒိုင်ခွက်၊ ပေတံ (အပြိုင်မျဉ်းတိုများဖြင့် သတ်မှတ်ထားသောတိုင်းတာမှုပုံစံ) စနစ်များဖြင့် တိုင်းတာဖတ်ရှုမှုလုပ်နိုင်သည်။ အချို့သောကယ်လစ်ပါများသည် ကွန်ပါ (ထောက်ချွန်ကဲ့သို့) အရာဝတ္ထု၏ အတွင်းပိုင်း (သို့) အပြင်ပိုင်းကို တိုင်းတာနိုင်သော်လည်း တိုင်းတာသည့်အမှတ် (စကေး) ပါဝင်မှုမရှိကြချေ။ ကယ်လစ်ပါ၏ ထိပ်အချွန်များကို တိုင်းတာမည့်အမှတ်နေရာများကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် ချိန်ညှိပေးနိုင်ပြီး ထိုရရှိလာသော ရလဒ်ကို ပေတံကဲ့သို့သော အမှတ်သားရှိ ပစ္စည်းများပေါ်တွင် တင်၍ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ဤပစ္စည်းများကို စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်၊ သံ၊ သတ္တုထည်များ၊ သစ်တောလုပ်ငန်း၊ သစ်သားလုပ်ငန်း၊ သိပ္ပံနှင့် ဆေးပညာတို့တွင် အသုံးချနိုင်သည်။
အစောဆုံးကယ်လစ်ပါကို အီတလီကမ်းရိုးတန်းအနီး ဂရိသင်္ဘောပျက်တစ်ခုတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရာ ထိုသင်္ဘောသည် ခရစ်ကြို ၆ ရာစု နှစ် သက်တမ်းရှိသည်။ ထိုသစ်သားပစ္စည်းလေးတွင် တစ်ဖက်၌အသေရှိ၍ တစ်ဖက်တွင် ရွှေ့နိုင်သောညှပ် (jaw) ရှိသည်။ ထိုသို့တွေ့ရှိမှု ရှားပါးသော်လည်း အခြားအထောက်အထားများအရ ရှေးခေတ် ဂရိ၊ ရောမသားတို့သည် ကယ်လစ်ပါများကို အသုံးပြုခဲ့ကြလေသည်။
ကြေးညိုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကယ်လစ်ပါတစ်ခုသည် ခရစ်နှစ် ကိုးရာစု သက်တမ်းရှိကာ တရုတ် ရှင်းမင်းဆက်လက်ထက်အတွင်း အနုစိတ် တိုင်းတာမှုများအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုပစ္စည်း၌ ထွင်းစာလေးများပါရှိ၍ "ရှိကျင့်ကော (Shijianguo) ၏ ပထမနှစ်၊ ပထမလ၊ ပထမရက်တွင် ပြလုပ်သည်" ဟု ပါရှိသည်။ ထိုကယ်လစ်ပါတွင် အခေါင်းပေါက်ကလေးတစ်ခုနှင့် ပင်တစ်ချောင်း ပါရှိကာ လက်မ၊ လက်မကို ဆယ်စိတ် စိတ်ထားခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။
ကွေးနေသော မျဉ်းတံပေါ်တွင် ၀ မှ ၁၀ မီလီမီတာ အမှတ်အသားပါသော ကယ်လစ်ပါ
ခေတ်သစ် ဗာနီယာ ကယ်လစ်ပါကို ဖျဲ ဗာနီယာ (အငအ္ဂလိပ်: ပိယာ့ ဗာနီယာ) က တည်ထွင်ခဲ့ပြီး ပက်ဒရူ နန်းနိရှ်၏ နောန်နိယပ်စ် ကိရိယာကို ပြင်ဆင်တိုးတက်အောင် လုပ်ထားခြင်းမျိုးဖြစ်လေသည်။
အတွင်းကယ်လစ်ပါ ကို အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ အတွင်းအရွယ်အစားကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုကြသည်။
အပြင်ကယ်လစ်ပါ ကို အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ အပြင်အရွယ်အစားကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုကြသည်။
သတ္တုထည်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ထောက်ချွန်ကယ်လစ်ပါ (divider caliper) ကို ကွန်ပါ ဟု ခေါ်ဝေါ်မှုများကြကာ အမှတ်တည်နေရာများကို တိုင်းတာမှတ်သားရန် အသုံးပြုကြ၏ ။ ထိပ်ချွန်များမှာ ချွန်မြနေ၍ ခြစ်တံ (scriber) ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အပေါက်နေရာတွင် ခြေတစ်ချောင်းကိုညအသေထား၍ ကျန်ခြေတစ်ချောင်းကို ပြုလုပ်မည့်ပစ္စည်းအပေါ်မျက်နှာပြင်တွင် စက်ဝိုင်း၊ အကွေး၊ အခုံးကဲ့သို့ မျဉ်းများရေးဆွဲနိုင်သည်။
မြေပုံများပေါ်က အမှတ်နှစ်နေရာကြား အကွာအဝေးကိုလည တိုင်းနိုင်သည်။ ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်လည်း အသုံးပြုကြ၍ အီးစီဂျီ ကယ်လစ်ပါများသည် အီးစီဂျီနှလုံးခုန်နှုန်းပြပုံ (electrocardiogram) ပေါ်ရှိ အကွာအဝေးများကို တိုင်းတာရာ၌ အခြားသင့်လျော်သော စကေးဖြင့်တွဲဖက်၍ နှလုံးခုန်နှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုကြသည်။ အိပ်ဆောင်ကယ်လစ်ပါကို နှလုံးကုထုံးပညာရှင် အေ. မာ့ကင်က တည်ထွင်ခဲ့သည်။[not in citation given]
ခြေမတူကယ်လစ်ပါ (Oddleg calipers) ကို Hermaphrodite calipers (သို့) Oddleg Jennys ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြ၍ ဘယ်ဖက်ဘေးတွင် ပြသထားပေးသည်။ ဤကိရိယာကို ပြုလုပ်မည့်ပစ္စည်း၏ အစွန်းမှ သတ်မှတ်အကွာအဝေးတစ်ခုနေရာတွင် မျဉ်းရေးဆွဲရန် အသုံးပြကြသည်။ ကွေးကောက်နေသော ခြေထောက်ကို ဝတ္ထု၏ အစွန်းနေရာတွင် ထားရှိပြီး ကျန်ခြေထောက်ကို အကွာအဝေးတစ်ခုနေရာ၌ အမှတ်မှတ်သားရန်အတွက် အသုံးပြကြ၏ ။
ဗာနီယာကယ်လစ်ပါပြပုံ။ ပုံပါအညွှန်းများမှာ ဤသို့ဖြစ်၏။
အပြင်ညှပ်များ (အကြီး): အခေါင်းပေါက်ပါ ထုလုံးရှည် (ဆလင်ဒါ) ၊ စက်လုံး ကဲ့သို့ အရာဝတ္ထုများ၏ အပြင်အချင်းကို တိုင်ရာ၌ အသုံးပြုသည်။
အတွင်းညှပ်များ (အသေး): အခေါင်းပေါက်ပါ ထုလုံးရှည် (ဆလင်ဒါ) ၊ ပိုက် စသည်များ၏ အတွင်းအချင်းကို တိုင်းရာ၌ အသုံးပြုသည်။
အနက်စမ်းတံ: ဘီကာခွက်သေး၊ အခေါင်းပေါက်ကဲ့သို့ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ အနက်ကိုတမုင်းတာရန် အသုံးပြုသည်။
အဓိကစကေး (မက်ထရစ်စနစ်): မက်ထရစ်စကေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီလီမီတာများဖြင့် မှတ်သားထား၍ ၁ မီလီမီတာ (အလျား) အထိတိုင်းတာနိုင်သည်။
အဓိကစကေး (ဗြိတိသျှစနစ်): လက်မနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကို မှတ်သားထားသော စကေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဗာနီယာစကေး (မက်ထရစ်စနစ်) ဤစကေးသည် ၀.၁ မီလီမီတာ (သို့) ၎င်းထက်ပိုတိကျသော တိုင်းတာခြင်း အထိ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
'ဗာနီယာစကေး (ဗြိတိသျှစနစ်) ဤစကေးသည် လက်မ၏ အစိတ်များကို တိုင်းတာပေးနိုင်သည်။
အထိန်း: တိုင်းတာရာ၌ ရွေ့နိုင်သောအပိုင်းကို အသေချုပ်ထားရန် အသုံးပြုကြသည်။
ဒိုင်ခွက်ကယ်လစ်ပါ ကို အချို့သောနယ်ပယ်များတွင် ဗာနီယာကယ်လစ်ပါနေရာ၌ အသုံးပြုကြ၍ ကယ်လစ်ပါရှိ ဒိုင်ခွက်မှ မီလီမီတာ၊ လက်မ အစိတ်များကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
အနာလော့ခ် ဒိုင်ခွက်နေရာကို ဒီဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အစားထိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မိုက်ခရိုမီတာ
ဘေးတိုက်ရွေ့လျောမှုအစား တိကျစွာ ခုတ်စားထားသော ဝက်အူတစ်ခုကို မိုက်ခရိုမီတာတွင် သုံးစွဲထားသည်။
↑ Mensun Bound: The Giglio wreck:awreck of the Archaic period (c. 600 BC) of the Tuscany island of Giglio, Hellenic Institute of Marine Archaeology, Athens 1991, pp. 27 and 31 (Fig. 65)
↑ ၂.၀ ၂.၁ Roger B. Ulrich: Roman woodworking, Yale University Press, New Haven, Conn., 2007, ISBN 0-300-10341-7, p.52f.
↑ Colin A. Ronan; Joseph Needham (24 June 1994)။ The Shorter Science and Civilisation in China: 4။ Cambridge University Press။ p. 36။ ISBN 978-0-521-32995-8။ adjustable outside caliper gauge... self-dated at AD9. An abridged version.
↑ Bronze Caliper of the Wang Mang Regime။ 31 August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 8 June 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကယ်လစ်ပါ&oldid=675891" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၃:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။